Vaovao - Inona no dikan'ny OEM / ODM amin'ny famokarana akanjo?
OEM sy ODM dia fomba roa amin'ny fanamboarana akanjo. Mety efa nahita azy ireo tamin'ny toerana maro ianao. Inona anefa no tena dikan'izy ireo? Andao hojerentsika.
1.OEM - Mpanamboatra Fitaovana Original
Mpanamboatra fitaovana tany am-boalohany amin'ny akanjo dia fantatra amin'ny hoe mpanamboatra akanjo marika fotsy na toy ny mpanamboatra akanjo marika tsy miankina. Ity fomba fanamboarana akanjo ity dia ahafahan'ny orinasa mamorona ny volavolan'izy ireo manokana sy ny famaritana ny akanjo akanjo fa misy ny marika misy eo aminy. Ity fomba fanamboarana akanjo ity dia mety ho an'ireo izay tsy manana endrika sy hevitra satria ny orinasa dia afaka manome azy ireo anao avy hatrany. Lasa mora kokoa izany rehefa mila manapa-kevitra fotsiny ianao hoe inona ny endrika nofidinao hataon'izy ireo na hamokarana betsaka.
2.ODM - Mpanamboatra endrika orina
OEM dia ny fanafohezana ny Original Equipment Manufacturer, izay fitsipika mora kokoa nefa koa sarotra kokoa. Ity fomba famokarana akanjo ity dia ahafahan'ny orinasa manamboatra akanjo mifanaraka amin'ny volavolanao sy ny famaritana anao. Hisy ny marika misy anao amin'ny vokatra, ary azo ampanjifaina amin'ny fotoana rehetra mifanaraka amin'ny safidinao. Raha misafidy ny làlan'ny ozinina fanamboarana akanjo OEM ianao dia mpiasa fotsiny io orinasa io ary anao avokoa ny endrika sy ny hevitra rehetra fa izy ireo no mamorona azy ireo.
Na izany aza, mila misokatra amin'ny soso-kevitra avy amin'ny orinasa ianao mba hitazomana ny fifandraisana mirindra eo aminareo roa. Ny tsipika fifampiresahana misokatra koa dia fanalahidin'ny fahombiazan'ny mpandraharaha akanjo OEM na ny tsipika fitondra-damba tsy miankina. Ny fidiran'izy ireo amin'ny vokatrao dia hanampy ny orinasanao mandritra ny fotoana maharitra, satria manam-pahaizana amin'ny asany izy ireo ary raisin'izy ireo ho toy ny azy ny vokatrao.